Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Brazil » Brazil ayaa Ku Faraxday Kulamo ka dhacay Expo Dubai 2020
Airlines • Aviation • Wararka Brazil • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Shirka Warka Warshadaha • Shirarka • News • Dib-u-dhiska • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Imaaraadka Carabta
Madaxweynaha Embratur (Wakaaladda Horumarinta Dalxiiska ee Brazil), Carlos Brito, iyo Wasiirka Dalxiiska, Gilson Machado Neto, ayaa waxaa qaabilay Maamulaha Guud ee Emirates Airlines, Sheikh Ahmed bin Seed Al Maktoum Oktoobar 3, 2021. The Ujeedada kulanka, oo la qabtay intii lagu gudajiray howlaha Expo Dubai 2020, ayaa ahayd in la kordhiyo isku xirka duulimaadyada Brazil ee ka yimaada Dubai iyo xarumaha kale ee Emirates, iyadoo diiradda la saarayo Amazon iyo Waqooyi -bari Brazil.
Hadda waxaa jira 110 duulimaad oo adduunka oo dhan ah oo ka yimid São Paulo oo ay bixisay Emirates.
Markay duulimaadyo badan oo Emirates ahi yimaadaan Brazil, Brazil waxay bilaabi doontaa ololeyaal xayaysiis ah si kor loogu qaado meelaha Brazil ee UAE iyo xarumaha kale ee waaweyn ee caalamiga ah.
Expo Dubai 2020 waxay leedahay ka -qaybgalka 190 dal iyo dhagaystayaal lagu qiyaasay ku dhawaad ​​25 milyan oo qof muddada dhacdada.
Laga soo bilaabo São Paulo, Emirates waxay hadda bixisaa 110 duulimaad oo adduunka ah. “Kuwa mar hore fursad u helay inay ku jiraan duulimaadka Emirates waxay xaqiijin karaan xamaasadda ay ku daweeyaan rakaabka, iyagoo wata diyaarado casri ah iyo adeegyo ka dhigaya khibradda duulimaadka mid aad loogu farxo. Markay shirkaddu bilawdo bixinta dalal badan oo reer Brazil ah, waxaan hubnaa in dalabku aad u sarreeyo. Waxay kordhin doontaa tirada dalxiisayaasha caalamiga ah ee imaanaya dalkeena, ”ayuu yiri wasiir Gilson Machado Neto.
Madaxweynaha Qulqulka iyo Wasiirka Dalxiiska ayaa u tilmaamay Sheekh Axmed bin Seed Al Maktoum in mar kale oo duulimaadyada Emirates ay yimaadaan Brazil, Brazil ay bilaabi doonto ololeyaal xayaysiis ah si kor loogu qaado meelaha Baraasiil ee Imaaraadka Carabta iyo xarumaha kale ee waaweyn ee caalamiga ah. “Maalgelintayada gelinta alaabada Brazil iyo meelaha loo aadi doono waxaa lagu hagaajin doonaa ficillada dhisidda xiriirka ganacsiga maxalliga ah, sida tababarka, miisaska miisaska ganacsiga, qoysaska, marka lagu daro ficillada lala yeelanayo dadweynaha ugu dambeeya,” ayuu yiri Wasiirka.
Furitaankii Pavilion -ka Brazil ee Expo Dubai 2020, Madaxweynaha Embratur, Carlos Brito, wuxuu muujiyey muhiimadda ay leedahay ka -qaybgalka Brazil ee dhacdooyinka sida Expo Dubai. “Dhiirrigelinta dalkeenna dibedda ayaa xitaa aad loogu baahan yahay xaaladdan tallaalka oo kordhay iyo dib -u -bilaabashada safarka oo tartiib -tartiib ah. Adduunku wuxuu u baahan yahay oo u qalmaa inuu ogaado dalxiiskayaga, ”ayuu yidhi. Waxqabadyada ay Embratur iyo Wasaaradda Dalxiiska u qorsheeyeen carwada waxaa ka mid ah soo dhaweynta martida, dhacdooyinka dhaqanka, bandhigyada leh sawirrada iyo farsamada gacanta, muusigga iyo qoob -ka -ciyaarka ee dhammaan gobollada Brazil. Intaa waxaa dheer, Embratur waxay sidoo kale qorshaynaysaa waxqabadyo waayo -aragnimo summad leh si kor loogu qaado is -dhexgalka dadka booqda waxayna u qaybin doontaa agabyada xayeysiinta.
Madaxweynaha Embratur Carlos Brito
Madaxweynaha Embratur iyo Wasiirka Dalxiiska ayaa sidoo kale qorsheeyey kulamo ay la yeelan doonaan wakiilo caalami ah inta lagu guda jiro Bandhigga, oo ay ku jiraan wadatashiyo lala yeesho Ra'iisul Wasaare Ku-xigeenka ahna Wasiirka Horumarinta Dhaqaalaha iyo Teknolojiyada ee Slovenia, Zdravko Počivalšek, iyo Xoghayaha Dalxiiska San Marino Frederico Amati. Heshiis laba geesood ah oo u dhexeeya Brazil iyo Slovenia waa in la saxeexaa inta ay ka qayb qaadanayaan Embratur iyo Wasaaradda Dalxiiska ee “Toddobaadka Brazil,” oo la qabtay intii u dhexeysay Nofeembar 9 illaa 15, Expo Dubai 2020.
Dalxiiska Baraasiil waxaa matala ficillada Embratur (Wakaaladda Brazil ee Horumarinta Dalxiiska Caalamiga ah) ee Expo Dubai 2020. Laba jeer, Hay'addu waxay soo jiidashada Brazil ee caadiga ah u qaadataa Imaaraadka Carabta: furitaanka, inta u dhexeysa Oktoobar 1 iyo 9 , iyo inta lagu jiro Toddobaadka Brazil, laga bilaabo Nofeembar 9-15. Waxaa la qabtaa shantii sanaba mar waxaana loo tixgeliyaa mid ka mid ah dhacdooyinka ugu muhiimsan adduunka, Bandhigga Adduunka wuxuu leeyahay muhiimad weyn xagga soo bandhigidda waddamada. Waxay ugu horeyn diiradda saarayaan hal -abuurka iyo abuurista ganacsiga. Dib loo dhigay sanadkii hore sababtuna tahay masiibada COVID-19, Bandhigga Dubai 2020, oo dib loo dhigay sababtuna tahay COVID-19 oo la qabanayo Oktoobar 1, 2021 illaa Maarso 31, 2022, ayaa waxaa ka qaybgalaya 190 dal iyo dad lagu qiyaasay dhagaystayaal ku dhow 25 milyan oo qof muddada lixda bilood ah ee dhacdada.